I-B2C CRM ibaluleke kakhulu kumabhizinisi abhekene namakhasimende | Martech Zone
I-B2C CRM ibaluleke kakhulu kumabhizinisi abhekene namakhasimende
NgoLwesibili, Agasti 25, 2015 NgoLwesibili, Agasti 25, 2015 UDavid Trice
Abathengi emakethe yanamuhla banikwe amandla amakhulu kunanini ngaphambili, ngenkuthalo bafuna amathuba okuzibandakanya namabhizinisi nemikhiqizo. Ukushintshelwa kwamandla amakhulu kubathengi kwenzeke ngokushesha okukhulu futhi kushiye izinkampani eziningi zingakuhlomele kabi ukusebenzisa lonke ulwazi olusha abathengi abaqale ukulunikeza ngezindlela ezintsha.
Yize cishe wonke amabhizinisi abhekene nabathengi asebenzisa izixazululo ze-CRM ukuphatha amakhasimende namathemba, iningi lawo lincike kubuchwepheshe obungamashumi eminyaka - futhi zazenzelwe ukuphatha ukuthengiswa kwe-B2B. Izinkampani eziningi zithembele kumarekhodi amakhasimende angafani ngaphakathi kwe-POS, eCommerce, noma amapulatifomu wokumaketha angahlanganyeli idatha komunye nomunye. Zakhelwe ukuxhasa imodeli yakudala ebinezigaba zokuthenga ezisebenza kakhulu, lezi zixazululo azikwazi ukunikeza izithombe eziphelele zabathengi banamuhla njengoba bengena futhi bephuma kumsele wokuthengisa kaningi, eziteshini ezahlukahlukene nezindawo zokuthinta ezahlukahlukene ngaphambi kokuguqula.
Okusemqoka wukuthi amasistimu asebenzayo nama-CRM asuselwa ekuziphatheni okudala awasebenzi ekuphatheni abathengi banamuhla. Ubunhloli abunikezayo buvalelwe kuma-silos, ahlukaniswe nalokho okufundwa ngezinye iziteshi nokuxhumana; lokhu kuyivimbela ekuhlanganiseni idatha yamakhasimende amasha ngesikhathi sangempela ukudweba isithombe esinembile sohambo olusha lokuthenga, oluyinkimbinkimbi futhi alunasisekelo.
Lokhu yikho okungiqhubele phambili ukudala i-ENGAGE.cx, uhlobo olusha ngokuphelele lweCRM olwakhiwe kusuka phansi-up ukunika amandla amabhizinisi ukwazi nokwakha ubudlelwano namakhasimende abo. Wazalelwa efwini, le nkundla ifunda indlela yokuziphatha yabathengi futhi yabelana ngemininingwane kuzo zonke iziteshi, ngisho nasezinkundleni zokuxhumana, ngenhloso yokuletha ukuhlakanipha kwamakhasimende okunembile ngokumangazayo lapho kubaluleke kakhulu: ukuzibandakanya komuntu ngamunye phakathi kwabasebenzi namakhasimende.
Ngiyibiza ngokuthi yi-B2C CRM.
Kungani i-B2C CRM?
Ku- ENGAGE.cx, siyakwazi lokho Ama-80% wenzuzo yakho alethwa ngamakhasimende akho angama-20%.
Cabanga ukuhlakulela ukuxhumana okuqinile nalawa makhasimende ngokuphatha ubudlelwano obufana nobungani bakho; ukwazana nokuqonda izindlela ezinhle kakhulu zokuxhumana ngaphakathi komongo wezimo ezahlukahlukene lapho uhlangana khona:
Yonke ingxoxo onayo nabangani bakho isuselwa kumlando owabiwe, futhi ngokwemvelo uyazi ukuthi ungawucabangela kanjani umongo wesimo lapho uxhumana.
Lapho beshaya, bethumela imiyalezo, bethumela i-tweet, uyazi ukuthi bangobani - amanani abo, izifiso zabo, nezidingo zabo.
Uma bekuthumela okuqukethwe, kuhlala kusebenza ngoba bayazi ukuthi ungubani.
Lapho befika endlini yakho, uyazi ukuthi ungabajabulisa kanjani, futhi kungenzeka ukuthi unesiphuzo sabo abasithandayo.
Ukufaka lolu lwazi ebhizinisini lakho, ufuna ukuthi i-CRM yakho ibe namandla okusiza hhayi kuphela lolu hlobo olusha lobudlelwano bamakhasimende kepha nokusiza ekwakheni amasha. I-CRM yendabuko ikhubazekile ngoba ulwazi lwayo lukhawulelwe ezimweni kuphela nasekubandakanyeni okwenzelwe ukuphatha.
I-B2C CRM yakho entsha izokuqonda ukuthi ikhasimende lakho liguquka kanjani kulo lonke uhambo lokuthenga futhi i-Relationship Cloud® yethu isebenza ukwazisa nokunikeza amandla abasebenzi ngokuhlakanipha kwamakhasimende okusebenzayo, yakhelwe phezu kwesikhulumi se-agile esiwela iziteshi zokubamba nokulawula idatha yokuziphatha.
I-B2C CRM Innovation: Ulwazi Lohambo Lwamakhasimende
Ifu lethu lobudlelwano linikeza ukuqonda, ukubonakala nomongo wokuthi amakhasimende akho akuphi ohambweni lwawo oluthile. Lokhu kunika amandla amabhizinisi ukuthi afunde izindlela ezihamba phambili zokubandakanya amakhasimende nganoma yisiphi isikhathi nendawo endaweni yemigomo yamakhasimende - kuzo zonke iziteshi, imidiya, nezindawo. Ngokuhamba kwesikhathi, sakha umugqa wesikhathi wempilo yekhasimende ngalinye nalo elihlinzeka ngamazinga wobuhlakani angakaze abonwe angasetshenziswa kubathengi ngabodwana noma kusengaphambili kumuntu womthengi.
Ukuqamba kwe-B2C CRM: Ukufukulwa Kwabasebenzi
Abasebenzi basemgqeni ongaphambili wokubandakanyeka kwamakhasimende futhi imvamisa kuyizinto ezibaluleke kakhulu ekwakheni ubudlelwano nasekudaleni ukwethembeka. Ama-CRM wendabuko awakwazi ukubanika amandla ngolwazi abaludingayo okwamanje ukuze basebenzise ukuxhumana kwekhasimende ngalinye. I-Relationship Cloud yenzelwe injongo ngokukhethekile ngokunikeza isisebenzi ESILUNGILE idatha yamakhasimende EBALULEKILE kuzo zonke izinyathelo zohambo. Cabanga njengokubonisana ngokwengqondo kumakhasimende ngamunye lapho abasebenzi bangasebenzisa amandla abo ukuqondisa ukuxhumana.
I-B2C CRM Innovation: Ipulatifomu Agility
Abahlinzeki bendabuko beCRM sebeqalile ukubeka kabusha iminikelo yabo maqondana nesipiliyoni samakhasimende, kepha kusalokhu yakhiwe njalo emgogodleni we-B20B CRM oneminyaka engama-2 noma iyinhlanganisela yokutholwa okuningi okuhlanganiswe ndawonye. Isimo asikho esidala ukushesha noma ukuphendula okudingekayo ukubhekana nezidingo zabathengi banamuhla. I-Relationship Cloud yenza ngokwezifiso ubuhlakani ngesikhathi sangempela futhi iba nobuchule kuyo yonke indawo yokuthinta ngokucubungula nokuhlaziya isimilo sempilo yamakhasimende esikhathi sangempela nemicimbi.
Ziningi izixazululo zeCRM laphaya ezilwela imakethe ye-B2C, kepha ngaphandle kokuthi ipulatifomu yakhelwe inhloso yokuletha ubudlelwano bomuntu siqu namakhasimende esikalini, ingazibiza nge-B2C? Abathengi banamuhla balambele ukuqondwa; bayakulangazelela futhi basabele kukho. Ngokusebenzisa i-B2B CRM yangempela kuhlelo lwabo lobuchwepheshe, izinkampani zingathuthukisa ubudlelwano obuhehayo nobuguqulayo namakhasimende, futhi lokho kungumahlukanisi ophambili wokuncintisana nengxenye yempumelelo esimeme.
Ungafunda ngezinto ezisemqoka ze-B2C CRM nokuthi unganothisa kanjani ulwazi lwamakhasimende ngokubheka iphepha lethu elimhlophe, Kungani Ikhasimende Elibhekana Nebhizinisi Lidinga i-B2C CRM. Ngoba siyazi ukubona ukukholwa, ungahlela futhi okomuntu siqu demo lapha.
Tags: b2cCRMukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendeENGAGE.cx
David Trice Tuesday, August 25, 2015 Tuesday, August 25, 2015
UDavid Trice ungomunye wabasunguli kanye ne-CEO ye ENGAGE.cx, i-CRM ehamba phambili eqhutshwa ngolwazi yebhizinisi. Ngaphambi kokwethula i- ENGAGE.cx Trice wayeyi-VP yeCRM e-Oracle, lapho ahola khona ukwethulwa kwe-Oracle's Fusion CRM.
I-Boomtrain: Ubuhlakani Bomshini Obakhelwe Abakhangisi
I-Viraltag: Thola, Hlela, i-Curate, Yabelana futhi ulandele izithombe ku-inthanethi